जसपाको फुटेको घोषणा, ठाकुर राजेन्द्रले ब्यूताए पुरानै पार्टी ! – hamrosandesh.com
जसपाको फुटेको घोषणा, ठाकुर राजेन्द्रले ब्यूताए पुरानै पार्टी !
पार्टी एकता भएको एक वर्ष नबित्दै जनता समाजवादी पार्टी टुक्रिने भएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार पार्टी एकता भएको पाँच वर्षसम्म वा एकता महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी विभाजन गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि ठाकुर र महतो पक्ष उपेन्द्र यादवसँग सँगै नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
बुधबार दिनभरिमा नयाँ पार्टीको विधान तयार गरिसकिएको बताइन्छ । जसपाको कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत भएपछि ठाकुरले राजपा ब्यूँताउन लागेका हुन् ।
जसपाको ५० सदस्यीय कार्यकारिणीमा २१ जना मात्र ठाकुरको पक्षमा छन् भने बाँकी २९ सदस्य यादवको पक्षमा छन् । संसदीय दलमा बहुमत सदस्य ठाकुरको पक्षमा छन् । ३२ सांसदमध्ये ठाकुरको पक्षमा १९ र यादवको पक्षमा १३ जना सांसद छन् ।
संविधानमा ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य लिएर नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रावधानअनुरूप जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सम्भवतः आजभोलि नै निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा०ं दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् ।राजपा दर्ता गरेसँगै चुनावका चिन्ह पञ्जा मागिने भएको छ । पञ्जा पहिले नेपाल सदभावना पार्टीको चुनाव चिह्न थियो ।
राजेन्द्र महतो गृहमन्त्री बन्दै, जसपालाई ७ मन्त्रालय दिने ओलीले गरे पक्का । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूह सरकारमा जाने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपा कम्तिमा ७ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने निश्चितप्रायः भएको हो ।
जसपाले चुनावी सरकारमा जान उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयसहित १० वटा मन्त्रालयको माग राखेको छ । त्यसबारे अझै छलफल चलिरहेको ठाकुरनिकट एक नेताले रिपोर्टर्स नेपाललाई बताए ।
मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा मिलेपछि आगामी हप्तामै जसपा सरकारमा जाने तयारी भएको छ । १५ जेठको बजेटपछि जसपाको सरकारमा सहभागिता हुने गरी तयारी भएको हो ।
जसपाबाट राजेन्द्र महतो गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । उनलाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनाएर लानेमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्री बन्ने सूचीमा शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, चन्दा चौधरी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, उमाशंकर अगरिया रहेका छन् । ठाकुर समूहमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता संघर्षको निर्णायक घडीमा साथ दिनेहरुलाई मन्त्री बनाउने निश्चितप्रायः छ ।